ယုံတမ်းစကား | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ယုံတမ်းစကား	# ကောလာဟလPublished August 15, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ယုံတမ်းစကား, သတင်းပေးသူ, ကောလာဟလ, ၀ါဒဖြန့်ခြင်း	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,851)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,494)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,209)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,053)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,078)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,404)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,225)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,723)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,772)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,416)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,357)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,230)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,168)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,138)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,458)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,426)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,112)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,909)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,773)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,763)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,294)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,898)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,798)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,746)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,615)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,574)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,357)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,234)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,168)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,082)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !